Covid ကာလ အတွင်း သိန်း(၁၅၀၀) ကျော်ဘဏ်မှာ ထည့်နိုင် ခဲ့ကာ တစ်လကို သိန်း(၅၀) ဝင်နေပြီ လို့ ပြောလာတဲ့ နေဒွေး – GaMone Media
Homepage / Celebrity / Covid ကာလ အတွင်း သိန်း(၁၅၀၀) ကျော်ဘဏ်မှာ ထည့်နိုင် ခဲ့ကာ တစ်လကို သိန်း(၅၀) ဝင်နေပြီ လို့ ပြောလာတဲ့ နေဒွေး
Covid ကာလ အတွင်း သိန်း(၁၅၀၀) ကျော်ဘဏ်မှာ ထည့်နိုင် ခဲ့ကာ တစ်လကို သိန်း(၅၀) ဝင်နေပြီ လို့ ပြောလာတဲ့ နေဒွေး
ပရိသတ်ကြီးရေ မိန်းကလေးပရိသတ်တွေရဲ့ အသည်းကျော် ဂျစ်တူးလို့ ခေါ်ကြတဲ့ မင်းသား နေဒွေး ကတော့ ယောကျာ်းပီးသတဲ့ဘော်ဒီဘော်ဒီကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ။ ဗီဒီယိုဇာတ်ကားတွေခေတ်ထဲက ရေပန်းစားလူကြိုက်များခဲ့တဲ့မင်းသားတစ်လက်ဖြစ်ပြီး ကျရာဇာတ်ရုပ်ကို သရုပ်ဆောင်နိုင်သူ တစ်ဦးပါ။
ရရင်ရသလိုပရဟိတတွေကိုလုပ်ဆောင်နေတဲ့ မင်းသား နေဒွေးကတော့ ဒီနေ့မှာ ”2020 နှစ်ကုန်ခါနီးပြီ.. ဒီနှစ်ဘာတွေလုပ်ပြီးပြီလဲ ပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လိုက်တော့…မြေကွက်၂ကွက် ဝယ်နိုင်ခဲ့တယ် ..ကိုယ့်နာမည်နဲ့လုပ်ထားတဲ့လုပ်ငန်းကလည်း အရမ်းအဆင်ပြေတယ်။ တစ်လကို အနည်းဆုံး သိန်း ၅၀ မကဘူး ရခဲ့တယ်။ အရောင်းဝယ်ကလည်း ထင်တာထက်အလုပ်ဖြစ်တယ်။စားချင်တာတွေလည်း အကြိမ်ကြိမ် ရှယ်စားဖြစ်ခဲ့တယ်။ဝယ်ထားတဲ့ မြေကွက်လေးကလည်း၅ဆလောက် မြတ်ခဲ့တာတွေ ရှိခဲ့တော့စီးနေတဲ့ကားစုတ်လေးကိုကောင်းတဲ့မြင့်တဲ့ အသစ်နဲ့ လဲနိုင်ခဲ့တယ်။
လက်ရှိလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကလဲပိုပြီးအဆင်ပြေလာတယ်။ အလုပ်ကိုလည်းပိုမို ကောင်းမွန်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဘဏ်မှာလည်း ငွေ သိန်း ၁၅၀၀ကျော်ထည့်နိုင်ခဲ့တယ် ။ခုဆို ပိုင်ဆိုင်သမျှတွေကမိသားစုနဲ့ အေးအေးဆေးဆေးနေလို့ ရပြီ ။ဒီနှစ်ထဲ စပ်တူရှယ်ယာ လုပ်ထားတာကလည်းပျမ်းမျှတစ်လ သိန်းဆယ်ကျော်မကရအုံးမှာ ဆိုတော့ အေးဆေးဖြစ်နေပါပြီ ။နှစ်သစ်မှာ သွားချင်တဲ့ ခရီးတွေ ထွက်မယ် …စားချင်တာတွေ စားမယ်… ဝယ်ချင်သမျှ အကုန်ဝယ်မယ်…အမှန်တော့ ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ ပြောနေတာပါအထင်မကြီးနဲ့ စိတ်ကူးယဉ်တာ.( လက်တွေ့လဲဖြစ်နိုင်တယ်နော် )။မိတ်ဆွ ကျတော့် အပေါ် သဘောထားလေးစီစစ်လို့ ရအောင်လို့ပါ…တကယ်ကတော့ စာဖတ်ရင်း ဝမ်းသာ အားကျ နေရင်တော့ သင်ဟာ ကျတော့်အပေါ် မုဒိတာစိတ်ရှိလို့ပါ စာဖတ်ရင်း တစုံတစ်ရာစိတ် ဖြစ်နေရင်တော့သင်ဟာ ကျတော့်အပေါ် တစုံတစ်ရာမူမမှန်စိတ် ရှိလို့ပါ စာဖတ်ရင်း ရီချင်နေရင်တော့သင်ဟာ ကျတော့် အကြောင်းကောင်းကောင်းသိသူပါ ဖတ်နေရင်း ကိုယ်တိုင်ထပ်တူပျော်နေရင်တော့ သင်ဟာ စိတ်ကောင်းရှိသူပါ….အသက်ရှည်ဆေးပါ…”ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ ပရိသတ်တွေကို စနောက်အရွှန်းဖောက်ခဲ့တာပါ။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးအားလုံး သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
Source :Nay Dway
ပရိသတ္ႀကီးေရ မိန္းကေလးပရိသတ္ေတြရဲ႕ အသည္းေက်ာ္ ဂ်စ္တူးလို႔ ေခၚၾကတဲ့ မင္းသား ေနေဒြး ကေတာ့ ေယာက်ာ္းပီးသတဲ့ေဘာ္ဒီေဘာ္ဒီကိုပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့သူတစ္ေယာက္ပါ။ ဗီဒီယိုဇာတ္ကားေတြေခတ္ထဲက ေရပန္းစားလူႀကိဳက္မ်ားခဲ့တဲ့မင္းသားတစ္လက္ျဖစ္ၿပီး က်ရာဇာတ္႐ုပ္ကို သ႐ုပ္ေဆာင္ႏိုင္သူ တစ္ဦးပါ။
ရရင္ရသလိုပရဟိတေတြကိုလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ မင္းသား ေနေဒြးကေတာ့ ဒီေန႔မွာ ”2020 ႏွစ္ကုန္ခါနီးၿပီ.. ဒီႏွစ္ဘာေတြလုပ္ၿပီးၿပီလဲ ျပန္ဆန္းစစ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့…ေျမကြက္၂ကြက္ ဝယ္ႏိုင္ခဲ့တယ္ ..ကိုယ့္နာမည္နဲ႔လုပ္ထားတဲ့လုပ္ငန္းကလည္း အရမ္းအဆင္ေျပတယ္။ တစ္လကို အနည္းဆုံး သိန္း ၅၀ မကဘူး ရခဲ့တယ္။ အေရာင္းဝယ္ကလည္း ထင္တာထက္အလုပ္ျဖစ္တယ္။စားခ်င္တာေတြလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ရွယ္စားျဖစ္ခဲ့တယ္။ဝယ္ထားတဲ့ ေျမကြက္ေလးကလည္း၅ဆေလာက္ ျမတ္ခဲ့တာေတြ ရွိခဲ့ေတာ့စီးေနတဲ့ကားစုတ္ေလးကိုေကာင္းတဲ့ျမင့္တဲ့ အသစ္နဲ႔ လဲႏိုင္ခဲ့တယ္။
လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းကလဲပိုၿပီးအဆင္ေျပလာတယ္။ အလုပ္ကိုလည္းပိုမို ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့တယ္။ ဘဏ္မွာလည္း ေငြ သိန္း ၁၅၀၀ေက်ာ္ထည့္ႏိုင္ခဲ့တယ္ ။ခုဆို ပိုင္ဆိုင္သမွ်ေတြကမိသားစုနဲ႔ ေအးေအးေဆးေဆးေနလို႔ ရၿပီ ။ဒီႏွစ္ထဲ စပ္တူရွယ္ယာ လုပ္ထားတာကလည္းပ်မ္းမွ်တစ္လ သိန္းဆယ္ေက်ာ္မကရအုံးမွာ ဆိုေတာ့ ေအးေဆးျဖစ္ေနပါၿပီ ။ႏွစ္သစ္မွာ သြားခ်င္တဲ့ ခရီးေတြ ထြက္မယ္ …စားခ်င္တာေတြ စားမယ္… ဝယ္ခ်င္သမွ် အကုန္ဝယ္မယ္…အမွန္ေတာ့ ျဖစ္ခ်င္ခဲ့တာ ေျပာေနတာပါအထင္မႀကီးနဲ႔ စိတ္ကူးယဥ္တာ.( လက္ေတြ႕လဲျဖစ္ႏိုင္တယ္ေနာ္ )။မိတ္ဆြ က်ေတာ့္ အေပၚ သေဘာထားေလးစီစစ္လို႔ ရေအာင္လို႔ပါ…တကယ္ကေတာ့ စာဖတ္ရင္း ဝမ္းသာ အားက် ေနရင္ေတာ့ သင္ဟာ က်ေတာ့္အေပၚ မုဒိတာစိတ္ရွိလို႔ပါ စာဖတ္ရင္း တစုံတစ္ရာစိတ္ ျဖစ္ေနရင္ေတာ့သင္ဟာ က်ေတာ့္အေပၚ တစုံတစ္ရာမူမမွန္စိတ္ ရွိလို႔ပါ စာဖတ္ရင္း ရီခ်င္ေနရင္ေတာ့သင္ဟာ က်ေတာ့္ အေၾကာင္းေကာင္းေကာင္းသိသူပါ ဖတ္ေနရင္း ကိုယ္တိုင္ထပ္တူေပ်ာ္ေနရင္ေတာ့ သင္ဟာ စိတ္ေကာင္းရွိသူပါ….အသက္ရွည္ေဆးပါ…”ဆိုၿပီး သူ႔ရဲ႕ ပရိသတ္ေတြကို စေနာက္အ႐ႊန္းေဖာက္ခဲ့တာပါ။ ဖတ္ရႈေပးၾကတဲ့ ပရိသတ္ႀကီးအားလုံး သာယာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ့ ေန႔ေလးတစ္ေန႔ကို ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္။
Previous post “ပရိသတ်တွေ အံ့သြမဆုံး ဖြစ်စေမယ့် ခပ်ဆန်ဆန်း လုပ်ရတာ ကို နှစ်သက်သူ ပတ်ထရစ်ရှာ ရဲ့ အမိုက်စား ဗီဒီယိုဖိုင်”
Next post ချစ်ရမှာ ကြောက် လို့ အပျိုကြီး လုပ်သင့် မလုပ်သင့် ပရိသတ်ကို အကြံတောင်း လိုက်တဲ့ မေပန်းချီ